KSplash Casri ah: Soo jiidasho iyo bilaw casri ah ama 'loading' mawduuc loogu talagalay KDE | Laga soo bilaabo Linux
KSplash (horey loogu yaqaanay bootsplash) waa sawirkaas ama animation-ka aan aragno marka KDE ay socoto si aan u galno fadhigayaga. Waxaan horey u dhignay dhowr (codadka loogu talagalay Slackware, Debian, Arch, iwm) halkan, markan KSplash ma lahaan doono astaanta wax walboo disto ah, waxay noqon doontaa mid fudud KDE:
Si aad halkan u dhigto waa tallaabooyinka:
1. download KSplash casri ah oo ka socda KDE-Look.org:
Download KSplash Casri ah
2. Fur Nidaamka doorbidida o Xulashada KDE.
3. Helitaanka Muuqaalka goobta shaqada ka dibna tab loo yaqaan Shaashadda Annunciator
4. Waxaad arki doontaa inay ku tusinayso dhowr KSplash inaad isticmaasho, waxaan gujin doonnaa badhanka oranaya Ku rakib faylka mawduuca
5. Halkaas daaqad ayaa naga furi doonta taas oo ay tahay in aan ka marno hel feylka hadda la soo dejiyey oo guji laba jeer.
6. Diyaarso, ka bax fadhiga oo ku soo noqo si aad u aragto isbedelka.
Sidee loo beddelaa asalka?
Markay rakibayaan KSplash, waxaa lagu keydin doonaa galka la yiraahdo Casri ah-KDE-Splash taas oo ku taal ~ / .kde4 / wadaag / barnaamijyo / ksplash / Mawduucyada / .
Waxa ugu horeeya ayaa noqon doona inaad gasho galkaas (~ / .kde4 / share / apps / ksplash / Mawduucyada / Casriga-KDE-Splash), halkaas oo aan ka heli doonno galka (sawirrada) iyo saddex faylal (main.qml, Preview.png iyo Theme.rc), waxaan galnaa galka la yiraahdo images.
Halkaas ayaan ku arki doonnaa feyl la yiraahdo dhagaxaan.png, taasi waa ta ay tahay inaan beddelno.
Tusaale ahaan, ka soo qaad inaad rabto inaad dhigto asalka ArchLinux, waxaad ka soo dejineysaa sawirka aad dooratay internetka (halkan tusaale ahaan), markaa waxay badalaan rocks.png wac (Wallpaper Arch hadda loo yaqaan rocks.png) iyo diyaar.
Sida iska cad maahan inay ahaato a wallpaper sax ah, ama aan ka ahayn sawirka la xiriira Linux. Tusaale ahaan, haddii aad jeceshahay, waxaad dhigi kartaa sawir ka mid ah ciyaarta aad ugu jeceshahay, si fudud u qaad shaashadda ciyaarta laga hadlayo, tusaale rakib Ha gaajoon kumbuyuutar Linux ah oo ay ka qaataan shaashad shaashad ah, ama ciyaar ka mid ah Windows (HayDay tusaale ahaan, oo la mid ah Beeraha Linux, waa inay soo dejistaan ​​Hay Day oo ay shaashada ka qaadaan, ka dibna beddelaan rocks.png iyo voila).
Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad ka raadsato sawirka aad rabto internetka.
Haddii aad rabto inaad bedesho astaamaha ama astaamaha, waxay noqon laheyd nidaam la mid ah, halkaas waxaad ka heleysaa .png ee astaamaha, waxay noqon laheyd arin inaad ku bedesho astaanta mid kale oo aad rabtohad iyo jeer ixtiraamaya cabirka!) iyo diyaar.
Nota: ~ / .Kde4 / galka waxaa la dhihi karaa ~ / .kde / taasi waa, bilaa 4 la'aan, tani waxay kuxirantahay distoorka
Waa hagaag wax kale oo lagu daro, waxaan rajeynayaa inaad ka heshay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » KSplash Casri ah: Bilaabis casri ah oo soo jiidasho leh ama 'loading' mawduuc loogu talagalay KDE
Wanaagsan !!! Waan ka helay!!! 🙂
Waxaan hadda ku rakibay Kubuntu 14.04 oo iyaduna xalay igu cusboonaysiisay KDE 4.13 (4.12.90) oo aan ka saaray Nepomuk (oo bummer ahaa) oo mid aad u fiican ii dhigtay.
Waa hagaag waxaan isku dayay inaan beddelo sawirka asalka laakiin ma shaqeynayo, shaashadda ayaa madow. Waxaan ku cabiray sawirka inuu la mid yahay "rocks.png", waxaan u badalay qaabkii ".png" (waa iska cadahay) waxaana isticmaalay isla magaca "rocks.png" Ma jiraa qof isku dayay oo isagay u shaqaysaa isaga?
Ku jawaab arkemedes
Runtu waxay tahay inay aad u fiican tahay, gaar ahaan Arch Linux xD
Waxaan ku saxay qalad yar qodobka: Splash waa bootka desktop-ka ksplash-na waa animation-ka boot-ka ee KDM (GDM-da waxaa loogu yeeraa Gnome Splash), laakiin bootsplash-ku waa nidaamka bootka, taasi waa, GRUB boot.
Ku jawaab r0uzic
Waxaa sidoo kale lagu rakibi karaa ikhtiyaarka "Hel mawduucyo cusub" isla shaashadda isla doorbididda.
xD buufintani waa wax weyn! hada wax debianita salka u dhig
Ku jawaab pigchan02
Wanaagsan oo qurux badan
KZKG: miyaan ku rakibi karaa Lubuntu?
Haddii aad tafatirto feylka main.qml, waxaad u turjumi kartaa Isbaanish ama luqad kastoo aad rabto.
Waad salaaman tahay, wadadee aan si sax ah uga heli karaa faylka; Waxaan ka raadiyay xididka oo waxaa jira dhowr iyo wadooyin kala duwan; Oo weliba waxaan doonayaa inaan beddelo luqadda shaashadda soo galitaanka ee i siinaysa qaabka kumbuyuutarka kala duwan.
kubuntu waxaad ka heli kartaa /home/obed/.kde/share/apps/ksplash/Themes/
meelaha kale ee hargabka ah waxaan ku jiri karaa .kde4
aad u wanaagsan, mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan soo arkay. Hadda mawduuc loogu talagalay kdm oo u muuqda mid wanaagsan ayaa maqan, habka, ma jiraa qof og meesha aad ka soo dejisan karto kaos one?
Hagaag, midna ma lihi, maad heli doontid mid Gentoo ah?
Dad badan waa inay isticmaalaan, waa wax aad u fiican
Waxay u egtahay qurux ... Waan arki doonaa haddii aan ka helo mid sidan oo kale ah XFCE: 3
Ma taqaanaa wax loogu talagalay XFCE?
X-Ogeysiinta: Ka hel ogeysiisyada dhammaan xisaabaadka emaylka ee kujira Firefox
Ku rakibida jawiga garaafka iyo darawalka fiidiyowga Arch Linux